डाटा चालित मार्केटिंग तातो छ! | Martech Zone
ब्लूकैबाट केही रोचक खोजहरू डाटा चालित मार्केटिंग रणनीतिहरूमा अध्ययन। मलाई लाग्यो कि यो विशेष गरी महत्वको आन्दोलनलाई रोचक बनाउँछ जब यो सबैभन्दा प्रासंगिक क्रस-च्यानल / क्रस-प्लेटफर्म अवसरहरूको लागि आउँदछ। जबकि खोज इञ्जिन मार्केटिंग प्रमुख हुन जारी छ, यो उल्लेखनीय रूपमा खस्कियो। म विश्वास गर्दछु कि गुगलले कुञ्जी शब्द लुकाएको थियो र उनीहरूको एल्गोरिदमलाई कसको कारणले मार्छ SEO उद्योग। कीवर्डहरू र श्रेणीकरण गर्नु भन्दा राजस्वमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने कुराको बारेमा बजारहरू ठूलो चित्र हेरेर फर्केका छन्।
माथिल्लो5र सामाजिक छोड्दा ईमेल जम्प देख्दा म पनि खुसी थिए। ईमेल मार्केटिंग २० बर्ष पुरानो उद्योग हो - इन्टरनेटमा पुरानो र सेक्सी पनि होइन। तर मार्केटिंग स्वचालन प्लेटफार्महरू (हाम्रा प्रायोजकहरू जस्ताबाट) दायाँ अन्तर्क्रियात्मक) हो सेक्सी फिर्ता ल्याउन अत्यधिक अनुकूलित डाटा-संचालित मार्केटिंग प्रयासहरूको साथ। सामाजिक अझै पनी एक व्यावहारिक रणनीति हो, तर कम्पनीहरूलाई थाहा छ कि ईमेल मार्केटिंग अत्यावश्यक छ जब यो मार्केटिंग र अवधारणालाई जोड दिन्छ!
भिडियोलाई ध्यान दिएर हेरिएकोमा पनि ठूलो छ! लागत घटेको छ र भिडियोको लागि अपेक्षाहरू बढेको छ। हामी हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई भिडियो लाइब्रेरीहरू विकास गर्न धक्का दिइरहेका छौं (हामीसँग अब मार्केटिंग भिडियो पृष्ठ छ!) र उनीहरूको साइटको प्रत्येक पृष्ठमा उनीहरूलाई अगाडि र केन्द्रमा राख्छौं। जाँच गर्नुहोस् Explainer भिडियो को 10 प्रकार केहि विचारहरूको लागि हाम्रो विज्ञापनदाता यम यम भिडियोहरूबाट!
टैग: स्वचालनbluekaiतथ्याङ्कडाटा चालित मार्केटिंगडाटाबेस मार्केटिंगईमेलइंफोग्राफ़कमार्केटिंग भिडियोमार्केटिंग भिडियोहरूमार्केटिंग खोज्नुहोस्सामाजिक संजालसामाजिक मिडिया मार्केटिङ